ယရှေုသညျအာရုံစိုက် | Apg29
သငျသညျလူမှုရေးမူဝါဒ, လုပ်ငန်းစဉ် 2030 နှင့်&#
သငျသညျယရှေုခရဘို့အရှည်လျားနောက်တဖန်ရောက်လိမ့်မည်သလား? သင်၏နှလုံးရာသီဥတုပြဿနာတွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ် 2030 မြေကြီးပေါ်ကဒီမှာပြဿနာတွေပိုပြီးအာရုံစိုက်လား?
ကျနော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတှငျနထေိုငျသောလူကိုမြင်ရတဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျယနေ့နေထိုင်ကြသည်။ ကျွန်မကျမ်းစာဖတ်သောအခါ, က says:
"နေရောင်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြသနိုင်ဖို့က Character နှင့်လနှင့်ကြယ်များ, မြေကြီးပေါ်မှာအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်မငြိမ်မသက်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြပါလိမ့်မည်သင့်သည်, ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးကိုလူတွေကကောင်းကင်တန်ခိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြပါလိမ့်မည်ဘို့, ကမ္ဘာ့အကွုံတှေ့လိမျ့မညျဘယျအရာအတွက်မျှော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အသက်ရှူဖြစ်လိမ့်မည်။ ။ ပြီးနောက်သင်လူသားသည်တန်ခိုးအားကြီးသောသူနှင့်ဘုန်းအသရေနှင့်အတူတစ်ဦးမိုဃ်းတိမ်၌ကြွလာသည်ကိုမြင်ရသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဖို့အစပြုလာသောအခါ, ထို့နောက်တက်ဖြောင့်နှင့်သင့်ဦးခေါင်းတော်ကိုချီ, သင့်လှတျမွောကျခွငျးချဉ်းကပ်သည်။ " လုကာ 21: 25-28 ။
ကျနော်တို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသီဥတုဖို့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည်သောလူများ, ဘယ်မှာကျနော်တို့ဧဝံဂေလိတရားအစီအစဉ် 2030 သို့မဟုတ်ရာသီဥတုမူဝါဒအပေါ်မဟုတ်ပါဘူးကြွေးကြော်နိုင်ကြသည်တွေ့ဆုံရန်။ ကျွန်တော်တို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အစီအစဉ် 2030, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးမူဝါဒကအာရုံစူးစိုက်မနေသင့်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံသညျယရှေုခရစျသနှင့်သူ၏ကြွလာပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျလူမှုရေးမူဝါဒ, လုပ်ငန်းစဉ် 2030 နှင့်ရာသီဥတုအပေါ်အကြောင်းဟောပြောအပေါ်အနိုင်ရဘာလဲ?
ခရစ်ယာန်တွေဟာအဖြစ်ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့ကလေးများအဖြစ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမှမခံစားသင့်ပါတယ်။ နှုတ်တော်ထွက်အပြောတတ်နှလုံးစည်းစိမ်မကွာခဏကဆိုသည်။ သငျသညျယရှေုခရဘို့အရှည်လျားနောက်တဖန်ရောက်လိမ့်မည်သလား? သင်၏နှလုံးရာသီဥတုပြဿနာတွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ် 2030 မြေကြီးပေါ်ကဒီမှာပြဿနာတွေပိုပြီးအာရုံစိုက်လား? ယေရှုက
ဒါကြောင့်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ကျော်နထေိုငျသောသူအပေါင်းတို့ကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်များအတွက် "ဒါပေမယ့်တစ်ကျော့ကွင်းအဖြစ်သင်တို့အပေါ်သို့ရုတ်တရက်ထိုနေ့ရက်ကြောင်း carousing, မူးနှင့်အသက်တာ၏စိုးရိမ်ပူပန်နှင့်အတူသင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုအလေးချိန်သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်။ အဆက်မပြတ်နိုး Be နှငျ့ခှနျအားသမျှသောအလိုတော်မှလွတ်မြောက်ရန်အဘို့ဆုတောင်းပဌနာ ဖြစ်ပျက်နှင့်လူသားသည်ရှေ့မှာရပ်။ "
အဲဒီအစားဒါအပေါ်လူမှုရေးပြဿနာများ, ရာသီဥတုပြဿနာတွေနဲ့အကြောင်းပြောနေတာများ, ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့အကြောင်းဟောပြောကြကုန်အံ့။ တစ်နေ့မှာသညျယရှေုခရစျသပြန်လာပြီးသငျသညျထိုနေ့ရက်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, မိမိစစ်မှန်တဲ့သတို့သမီးရဖို့လိမ့်မည်နည်း သို့မဟုတ်ပါကသင်ကအန္တိခရစ်သူသည်ပိုမိုအာရုံစိုက်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်?
ငါသညျကောငျးကငျအိမ်ထောင်မှာဖြစ်တောငျ့, ငါ့အာရုံကိုသင်သညျယရှေုခရစျသညျသူ၏သတို့သမီးကိုကောက်ဦးမည်သည့်အခါနေ့ကဖြစ်လိမ့်မယ်ပါ! နိုးထမကြာမီအိပ်ပျော်သောသင်တို့သည်ဤမျှဓမ္မရာဇဝင်ယေရှုခရစ်၏မင်းကြီးသည်နောက်တဖန်မည်။ ဤတွင်အဆုံးမှာအချို့သည်သမ္မာကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်ဖို့ passages ။
2 Pettrusbrevet 3: "ဘာသခင်ဘုရားကြွလာမည်ဟူသောဂတိတော်အကြောင်းကို: အားလုံးအထက် 3-4, သင်နောက်ဆုံးသောကာလ၌ နေ. , သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒများအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းနှငျ့သငျကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်တောင်းသောသူမညျဖွစျကွောငျးမှတ်မိနေလိမ့်မည် ငါတို့ဘိုးဘေးများပြီးသားကွယ်လွန်သွားကြပါပြီ, ကကမ္ဘာ၏ဖန်တီးမှုကတည်းကရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့အရာရာပါပဲ။ "
1 သက်သာလောနိတ် 5: 2-3 သင်သည်ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်ညဉ့်အခါသူခိုးကဲ့သို့လာအလွန်ကောင်းစွာသိ၏။ လူတွေပြောပါမယ့်အခါ, အမျိုးသမီးတစ်ဦးကလေးမွေးဖွားပေးတော်မူမည်, သူတို့မလွတ်ရသောအခါအဖြစ်ရုတ်တရက်အလုပ်သမားဝေဒနာအဖြစ်ထို့နောက်ဘေးဥပဒ်ကို "အရာအားလုံး, ငြိမ်းချမ်းသောနှင့်လုံခြုံ" ။
မဿဲ 24: ထိုကာလ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနေရောင်သည်မိုက်လိမ့်မည်နှင့်လသည်အရောင်ကိုမပေးပါလိမ့်မယ်ထိုခဏခြင်းတွင်အပြီး 29-30 ။ ကြယ်တို့သည်ကောင်းကင်မှကျကြလိမ့်မည်နှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်တန်ခိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါက Man ဇာတ်ကောင်သားတော်သည်ကောင်းကင်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်ဟု, အဲဒီနောက်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မည်, သူတို့လူသားသည်တန်ခိုးအားကြီးသောသူနှင့်ဘုန်းအသရေနှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးလျက်ကြွလာမြင်ရကြလိမ့်မည်။
2 တိမောသေ 3: 1-5 ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌, အချိန်ခက်ခဲကြောင်းကိုလည်းငါသိ၏။ ထိုအခါကလူကိုယ်တိုင်သာနှင့်ငွေစဉ်းစားကြလိမ့်မည် သူတို့မ, ကောင်းသောသစ္စာပျက်, မဆင်မခြင်နှင့်အထင်အမြင်ကြီးသောအဘို့, ဝါကွှားမာနထောင်လွှား, စျောကားမျောကား, မိဘမှနားမထောင်, ကျေးဇူးကန်းဆိုးခြင်း, ချစ်ခြင်းခြင်းမရှိဘဲ, လွှတ်, ကဲ့ရဲ့အပြည့်အဝ, ထိန်းအကွပ်မရှိသော, ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကပိုပြီးဘုရားသခင်ထက်အပျော်အပါးကိုချစ်။ သူတို့တစ်တွေမျက်နှာဖုံးအဖြစ်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသယ်ဆောင်သို့သော်၎င်း၏အာဏာကိုငြင်းပယ်။ သူတို့ထံမှဝေးနေပါ။
ဒံယေလ 12:4သင်တို့မူကား, ဒံယေလ, ထိုစကားကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အဆုံးအဆသည်အထိစာစောင်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထားရပေမည်။ အတော်များများကလိမ့်မည်နှင့်အသိပညာတိုးပွားစေမည်။ "
လုကာ 21: 25-26 တပါးအမျိုးသားတို့ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်မငြိမ်မသက်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြရလိမ့်မည်နေလ၌ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်ကြယ်, မြေကြီးဖြစ်တော်မူမည်ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးဟောက်။ မိုဃ်းကောင်းကင်တန်ခိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြပါလိမ့်မည်ဘို့လူများ, ကမ္ဘာကြီးကိုအပေါ်လာမယ့်အရာကိုအတွက်မျှော်ကြောက်စိတ်များသေဆုံးပါလိမ့်မယ်။
မဿဲ 24: 42-44 စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အဘို့သင့်သခင်ဘုရားဘယ်အချိန်နာရီ၌ရောက်လာမည်ကိုမသိ။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်အိမ်တော်ကိုပိုင်ရှင်သူခိုးသို့ရောက်လာသည်ကား, သူကနိုးနေအိမျသို့ခြိုးဖောကျရာမှသူ့ကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့ညဉ့်ဘယျအခြိနျမှာကိုသိလျှင်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုကြောင့်သင်သည်လည်းရသောအခါလူသည်ပေါ်ထွက်ရ၏၏သားတျောသငျသညျအနညျးဆုံး, ကမျှော်လင့်ထားကြသောအခါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆင်သင့်ရှိပါစေ။
မဿဲ 24: ကိုယ်တော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာ; မယုံကြည်း 23-24 သင်တို့သည်အ အကယ်. ပြောသည်ကြသည်! မမှန်သောကယ်နှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်ကြီးစွာသောပုပ္ပနိမိတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်အလွန်ရွေးကောက်ခံ, လှည့်ဖြားဖို့အံ့ဘွယ်သောအပါလိမ့်မယ်။
1 ယော 2:18 ချစ်သားတို့, ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအန္တိခရစ်အများအပြားအန္တိခရစ်လာကြပြီယခုပင်ရောက်လိမ့်မည်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ ဒီကနေကျွန်တော်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ပါသည်နားလည်ပါသည်။
ဒါကအမြင်များများအတွက်ရပ်တည်ရန်စာရေးဆရာ get တစ်ဦးစာဖတ်သူကိုအီးမေးလ်ကဖြစ်ပါတယ်။